Peixin dia nandray anjara tamin'ny ANDTEX 2019 tany Bangkok, Thailand | PEIXIN
ANDTEX 2019 dia ny hetsika izay angonan'ny mpamokatra, mpikaroka, mpampiasa ary mpitarika indostria manerantany mba hivory hitrandraka ny haren'ny tombontsoa vaovao ho an'ny olona tsy misy sy ny vokatra fidiovana any Azia Atsimo Atsinanana.
Azia Atsimoatsinanana dia ahitana firenena 11 anisan'izany i Thailand, Indonesia ary Malaysia, miaraka amin'ny mponina 640 tapitrisa miaraka. Zaza vaovao 10 tapitrisa mahery no teraka isan-taona, ny isan'ny vehivavy dia 300 tapitrisa, ary 40 tapitrisa ny antitra / antitra.
Ny fahaizan'ny famokarana tsy misy ankehitriny dia tsy ampy ahafahana manome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa any amin'ny faritra, indrindra fa amin'ireo vokatra tsy misy haingam-bolo, izay tsy amboarina any Thailandy na any Azia Atsimo Atsinanana.
Nandritra ny vanim-potoana ara-drariny, noho ny haitao teknolojia avo lenta, ny serivisy avo lenta ary tsara indrindra, ny PEIXIN Machinery dia nahasarika mpanjifa maro manerana ny tsena. Taorian'ny nampidirantsika ny fiasan'ny milina, mpandinika ny fizotran'ny vokatra sy ny teknolojia, maro ireo mpanjifa no nidera ny milina, indrindra ny masin-jaza diaper sy milina underpad. Nanao izay azonay natao izahay mba hamaliana tsara sy hitandrina ny fanontaniana rehetra. Afa-po amin'ny serivisy ny mpanjifa rehetra.
Izahay dia manangona bebe kokoa hatrany amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ary mampiditra ireo rafi-pitantanana mandroso satria tianay ny mijanona ho dingana iray eo aloha. Ary manantena ny hamindra hoavy marevaka kokoa amin'ny mpanjifantsika rehetra.
Mini pad Production-dalana , Panty Liner Production-dalana , Mirosoa Up Machine , mando mamafa Machine , Daily fidiovana Machine , Lady pad Machine .